Best Online foramu kubvira 2004
more ...Kupindura zvakare kune mafoni
Saina foramu yemahara
Gadzira sarudzo yezita reakaundi (yako subdomain) uye zadza yako email kero. Ramba uchifunga kuti yako yekutanga password password inotumirwa kune yako email kero. Iwe hauzombogashira spam kana kushambadzira kubva kwatiri. Kunyange zvakadaro, zvinogona kuitika kuti iyo email ine yako yepakutanga Administrator password yakaendeswa kune yako spam folda.
Pano iwe unowana zvachose yemahara forum ine akawanda maficha. Gadzira injini yemahara yekutsvagirwa yakagadzirirwa, free forum, nekukurumidza uye nyore mumaminitsi mashoma, yakavimbiswa yemahara. Iwe unogona kushandura mavara, kupa zvikamu, kurambidza vashandisi, kugadzira mapoka uye zvimwe zvakawanda. Iko kuiswa kweforamu yako zvizere otomatiki, kungoita masekondi mashoma mushure mekufuga muforamu yako ichishanda zvakakwana, iwe unogona kuiwana nekukurumidza nekuichinjisa kune zvido zvako nepfungwa. Zvichengete dambudziko uye basa remaforamu kuiswa pane server. Misoro pamusoro pekuwanika, traffic uye kuchengetedza chinhu chekare neyako foramu.
Account Account [A-z uye 0-9]: .freeboard.at
Pano iwe unowana zvachose yemahara forum ine akawanda maficha. Gadzira injini yemahara yekutsvagirwa yakagadzirirwa, free forum, nekukurumidza uye nyore mumaminitsi mashoma, yakavimbiswa yemahara. Iwe unogona kushandura mavara, kupa zvikamu, kurambidza vashandisi, kugadzira mapoka uye zvimwe zvakawanda. Iko kuiswa kweforamu yako zvizere otomatiki, kungoita masekondi mashoma mushure mekufuga muforamu yako ichishanda zvakakwana, iwe unogona kuiwana nekukurumidza nekuichinjisa kune zvido zvako nepfungwa. Zvichengete dambudziko uye basa remaforamu kuiswa pane server. Misoro pamusoro pekuwanika, traffic uye kuchengetedza chinhu chekare neyako foramu. Mazwi ekushandiswa kubva pane anoshanda anoshanda.